Izixhobo ezikwi-Intanethi ze-SEO zonxibelelwano, amagama aphambili kunye nokuKhangelwa kweNqanaba
Sisoloko sikhangela izixhobo ezikhulu kwaye sinomzi-mveliso weedola eziibhiliyoni ezi-5, i-SEO yimarike enye enetoni yezixhobo zokukunceda. Nokuba uphanda wena okanye okhuphisana nabo kwi-backlinks yakho, uzama ukufumanisa amagama aphambili kunye nemigqaliselo yecocurrence, okanye uzama ukubeka esweni indlela indawo yakho ekuyo, nazi izixhobo ezithandwayo ze-SEO kunye namaqonga kwintengiso.
Iimpawu eziphambili zeZixhobo zoKwenziwa kweeNjini zoKhangelo kunye neQonga lokuLanda
Uphicotho-zincwadi - Ukuphicothwa kwe-SEO kukhasa indawo yakho kwaye kukwazise ngemicimbi enokuthi ichaphazele isikhundla sakho.
Uhlalutyo lwe-Backlink -Ukuba indawo yakho inxulunyaniswe neziza ezinegunya lokukhangela elibi, unokuba nexesha elibi. Ukukwazi ukuhlalutya ivolumu kunye nomgangatho wamakhonkco akhomba kwimimandla yakho kunyanzelekile ukuba usombulule ingxaki eziphambili kwimicimbi yokuphononongwa kunye nohlalutyo lokhuphiswano.
Ukhuphiswano loPhando -Ukwazi ukungena okanye ukufumana okhuphisana nabo, inqanaba labo, kwaye yintoni eyahlula idomeyini kunye namaphepha akokwakho ukuze uchonge izithuba onokuthi uzigcwalise.
Imayini yedatha -Ukulahleka okumangalisayo kuninzi lwezi ziqonga kukukwazi ukumakisha, ukwahlulahlulahlula, ukudibanisa, idatha yam, kunye nokuphuhlisa iingxelo kwiiseti ezinkulu kakhulu zamagama aphambili.
Ukufunyanwa kwegama elingundoqo Ngelixa uninzi lwamaqonga okubeka iliso ekubonelela ngezinga elichanekileyo, awakuvumeli ukuba ufumane ukuba ngawaphi amagama aphambili onokuthi ubekwe kuwo ongawaziyo.
Ukwahlula ngamagama aphambili -Ukubeka iliso kumagama aphambili ambalwa akunakunika umfanekiso ochanekileyo njengamaqela eendibaniso zamagama afanayo kunye nokunika ingxelo ngendlela oqhuba ngayo ngokubanzi kwisihloko. Ukuqokelela amagama aphambili yeyona nto ibalulekileyo kwizixhobo zokubeka esweni inqanaba le-SEO.
Uphando elingundoqo -Ukuqonda igama eliphambili elinxulumene neemveliso kunye neenkonzo ozinikezelayo kubalulekile kwimizamo yakho yokuthengisa umxholo. Izixhobo eziphambili zophando zihlala zibonelela ngokudibana kwamagama aphambili, indibaniselwano yamagama aphambili anombuzo, indibaniselwano yamagama aphambili anomsila, kunye nokhuphiswano lwegama eliphambili (ukuze ungachithi ixesha lakho uzama ukubeka inqanaba kwimigangatho ongayi kuma kuyo ukufumana Ukutsalwa okuvaliweyo.
Ukubeka esweni ukuGcina amagama aphambili -Ukwazi ukufaka amagama aphambili kwaye ubeke iliso kwinqanaba labo ngokuhamba kwexesha yeyona nto iphambili kuninzi lwamaqonga. Ngenxa yokuba iziphumo zophando ikakhulu zenzelwe umntu, obu buchule busetyenziselwa uhlalutyo oluhamba phambili ngokubanzi ukubona ukuba iinzame ozenzayo ziyaluphucula udidi lwakho kumagama aphambili okanye hayi.
UkuBekwa kweliso kwiNqanaba lamagama aphambili aseKhaya -Kuba indawo yomsebenzisi ophandayo kunye neshishini lakho linokudlala indima enkulu, uninzi lwamaqonga okubeka iliso elingamagama aphambili abonelela ngeendlela zokulandela umkhondo wenqanaba lakho ngokobume bendawo.
Ukukhuhla kunye nohlalutyo lwangaphakathi -Izixhobo ezihlalutya ulawulo lwakho lwendawo, ulwakhiwo lwephepha, isantya sephepha, kunye neminye imiba enxulumene noko ziyamangalisa ukulungisa imiba enokuthi icace gca kodwa enokubangela iingxaki ezininzi xa usezingeni.
Ukwabelana ngelizwi - Iingxelo zengqondo ezikhuphisanayo ezibonelela ngophawu lwakho ngenkqubo yokulandela umkhondo iyonke ukubonisa isabelo sakho sokukhangela kunye neencoko zentlalo kwi-intanethi zikubonise ukuba wenza intloko. Emva kwayo yonke loo nto, unokuba ukwandisa ukubonakala kokukhangela, kodwa mhlawumbi umntu okhuphisana naye wenza owona msebenzi ungcono.
Impembelelo yasekuhlaleni -Kuyindalo nje ukuba umdla onomdla kuwo kwimidiya yoluntu sisalathiso esikhulu segunya olakhayo ngeeinjini zokukhangela. Amaqonga amatsha e-SEO abonelela ngokuqonda kunxibelelwano phakathi kophando kunye noluntu kwaye kuyahlawula!
Uphando lwe-YouTube -Ihlala ihoywa, i-YouTube yi- # 2 yokukhangela emhlabeni njengamashishini amaninzi nangakumbi kunye nabathengi ngezihloko zophando abafuna iinkcazo zevidiyo, iiprofayili zemveliso, kunye nendlela yokwenza ngayo.
Uluhlu lweeNjini zeeNjini zokuKhangela
I-Bing Webmaster Tools -Phucula ukusebenza kwendawo yakho xa ukhangela. Fumana ukufikelela kwiingxelo zasimahla, izixhobo kunye nezixhobo.
I-Google Webmaster Tools -Ibonelela ngeengxelo ezineenkcukacha malunga nokubonakala kwamaphepha akho kuGoogle.
Uluhlu lwezixhobo ze-SEO zonxibelelwano, amagama aphambili kunye nokuKhangelwa kweNqanaba
IAccuRanker -Zenzekelayo kwinkqubo yokujonga indlela amagama akho aphambili abeka ngayo kuGoogle nakwiinjini zokukhangela ze-Bing ngohlaziyo oluqhubekayo.
Usetyenziso lweWebhu oluPhambili Izikhundla ezitsha mihla le, ngeveki nakwimfuno. Kwidesktop, uphendlo lweselfowuni kunye nolwasekhaya. Ipakishwe kakuhle kwiingxelo zelebheli emhlophe. Iyafumaneka kuso nasiphi na isixhobo.
Ahrefs Umhloli weSiza-Esona sikhombisi sikhulu kunye nesona sihlaziyiweyo seelinki eziphilayo. Isalathiso sihlaziywa rhoqo emva kwemizuzu eli-15.
IgunyaLabs -Sebenzisa injini yethu yokukhangela kunye nedatha yamagama aphambili ukuze ubeke esweni i-SEO yakho, ukujonga umkhondo wasekhaya kunye noweselfowuni, kunye nokufumana kwakhona amagama aphambili.
IBlueEdge SEO liqonga le-SEO lokuqala lokuhambisa i-ROI eqinisekisiweyo- evumela abathengisi ukuba bandise ingeniso kuphando lwezinto eziphilayo ngendlela enokulinganiswa nengalindeleka.
Ingqondo ye-SEO Iimpawu ezizodwa ze-SEO eziza kukhulisa uhlalutyo lwakho lwekhonkco kunye neziphumo zonxibelelwano.
Colibri ikunika ukuqonda malunga nendlela yokufumana ngakumbi ukugcwala kunye nabathengi kwi-SEO.
Ukukhanya kokuKhangela lelona qonga lisetyenziswa kakhulu le-SEO-ukuxhobisa abathengisi beshishini ukuba balawule ukusebenza kwabo.
Iplatifomu yokuThengisa engenayo eCuutio -Zazi ezona zikhundla zakho kunye nemeko yokhuphiswano kuGoogle, gcina umkhondo weziphumo ze
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela kunye nokuhlalutya ukusebenza ngokubanzi kwamagama aphambili abalulekileyo
Iimpawu zeDragoni Inika uhlalutyo kunye nokuqonda okufunekayo ukukala ngaphezulu kwabakhuphisana nabo kwaye ujike ingxelo yenyanga nganye ibe yimpepho.
Jonga amagama aphambili sisixhobo sophando samagama aphambili simahla kubandakanya isitshixo sevolumu yamagama aphambili, umvelisi wamagama aphambili, umbuzo wamagama aphambili, kunye nomvelisi wamagama aphambili ku-Youtube.
Ginzametrics yenza i-SEO yeshishini ibe lula kwaye kuphela kweqonga lokunceda abathengisi benze imali ngokufanelekileyo kwizithuthi ezivela kuphando lwezinto eziphilayo.
I-SEO yeShift Inkqubo yesoftware ibeka phakathi idatha ye-SEO yabathengi bakho (irenki, i-backlinks, imiqondiso yezentlalo, ubukrelekrele obukhuphisanayo, uGoogle Analytics kunye nophando lwamagama aphambili) kwaye ibonelela ngokuzenzekelayo, ehleliweyo, ebhalwe ngelebheli emhlophe eneengxelo ze-SEO ishiya ixesha elininzi kwiqela lakho leenkonzo ukuba liphumeze imisebenzi ye-SEO eya kuthi phucula ubukho bewebhu babaxhasi bakho.
Ikhonkco -Kusebenziseka ngokulula kwaye kufikeleleke kwi-backlink tracker
SEO enkulu - Qhagamshela izixhobo zobukrelekrele ze-SEO kunye ne-Intanethi ye-Intanethi kunye neNtengiso. Indawo yokuKhangela indawo ibonisa ikhonkco elingene ngaphakathi kunye nedatha yesishwankathelo sesiza
IMeta Forensics I-Meta Forensics yindawo yokwakha iwebhusayithi, uhlalutyo lwangaphakathi kunye nesixhobo se-SEO esinceda ekuchongeni iingxaki ezingabonakaliyo zewebhusayithi ezinokuchaphazela iindwendwe zakho, abakhangeli beenjini yokukhangela kwaye ekugqibeleni, kuthintela indawo yakho.
Ukujonga i-Backlinks -Gcina yonke idatha yekhonkco lakho phantsi kophahla olunye nezixhobo zethu zolawulo.
moz -Isoftware ekumgangatho ophezulu ye-SEO kuzo zonke iimeko, ukusuka kwiqonga lethu le-SEO-in-one kwizixhobo ze-SEO yendawo, ishishini le-SERP analytics, kunye ne-API enamandla.
Unokhenketho -Isoftware ye-SEO esetyenziswa ngamawaka abaYili beWebhu, abaCebisi be-SEO kunye neeArhente zokulawula abathengi babo be-SEO.
Umhloli weNetpeak -Isixhobo sophando esinemisebenzi emininzi yohlalutyo lwe-SEO ngobuninzi. Esi sixhobo sinento eyahlukileyo evumela ukuhlalutya iqhinga lokunyusa abakhuphiswano kunye nokuphanda iiprofayile zangasemva kwiwebhusayithi okhuphisana nayo.
Ubusuku -I-tracker yokusebenza ye-SEO kunye nesixhobo sohlalutyo
Ontolo -IsiXhobo sethu soXhobo soKwakha sibe yenye yezona zinto zixhaphakileyo zentengiso ye-intanethi kunye nezixhobo zekhonkco zonxibelelwano yi-SEO ephezulu kunye nokunxibelelanisa iingcali zokwakha izinto ezizisebenzelayo kunye nekhonkco lokukhangela ubuchule.
Posirank -Iqonga lethu levenkile ethengisa izinto ngokubanzi aligxininisi kuphela kuyo yonke inkonzo enokubakho ye-SEO kwideshibhodi enye-ikwaxhasa ukuzenzekelayo okupheleleyo.
Ngokufanelekileyo izixhobo ezinamandla, ezinobuntu ezenza ukuphucula iwebhusayithi yakho ibe ngamava amnandi. Ukubeka iliso kutshintsho lwemihla ngemihla, ukulinganisa ukusebenza kwe-SEO, kunye nokuphucula isikhundla seinjini yokukhangela ngokulula.
Isikhundla sePro Tracker -Fumana olona luhlaziyo, kulula ukuhlalutya ulwazi olukwinqanaba lakho kwiiwebhusayithi zakho, ukuze uhlale inyathelo elinye ngaphambi kokhuphiswano kwaye wandise inzuzo yakho.
Inqanaba lokuqhuba kweDrive Iqonga le-SEO kunye nesoftware yobukrelekrele kweshishini ikwenza ukuba umbe nzulu kulwazi lwe-SEO esele ikufutshane nawe.
Ubume -Jonga indawo yakho yewebhusayithi kwaye uhlalutye abakhuphisana nabo kwiinjini zokukhangela ezithandwayo ngexesha langempela.
Kwinqanaba -Iingxelo zemihla ngemihla kunye nokuqonda kwiwebhusayithi yakho kunye nokuphumelela kwintengiso.
InqanabaScnner -Gada indawo yakho yamagama aphambili kuGoogle ngeakhawunti yasimahla.
Inqanaba lokulandela umkhondo nguSpySERP -Bonelela ngabaqalayo be-SEO kunye neengcali ngokufanayo kwingoma yangaphakathi ekusebenzeni kwephepha lewebhu kwiinjini zokukhangela ezininzi.
InqanabaSonic -Ukulandelela utshintsho lwemihla ngemihla kwizinga lakho, fumana indawo ephezulu kubahlalutyi, hlola abakhuphisana nabo kwaye uphucule irenki zakho zokukhangela.
UluhluWatch Uhlalutyo lwenqanaba, ukubukela kwe-backlink, iingcebiso zamagama aphambili, iilebheli ezimhlophe, ukunika ingxelo kunye nohlalutyo lwewebhusayithi.
ihlungulu inezixhobo ezingama-30 + zokukunceda ufumane iziphumo kuyo yonke le misebenzi yentengiso ekwi-intanethi.
I-Rio SEO lelona qonga libalaseleyo le-SEO lokuhambisa impumelelo yokukhangela kwihlabathi liphela kwi-Organic, uPhendlo lwasekhaya, Imfono kunye neMithombo yeendaba yeNtlalontle kwiiNtengiso eziPhezulu kunye neeArhente.
Iimpawu zokukhangela -Uphando lwethu nentlalo kubahlalutyi Isoftware yokukhangela iimetwork Suite ngohlalutyo olusekwe kwidatha kunye nezisombululo ezinengqondo ezenza abathengisi kunye nee-SEOs ukubeka iliso nokwandisa iintshukumo ze-SEO zelizwe okanye zamanye amazwe kwaye oko kunyuse isabelo sentengiso, ingeniso kunye neenzuzo.
YENOKWAMA.io - itsheki yamagama aphambili asimahla ekuvumela ukuba ulandele ukuya kumagama aphambili angama-50.
UMSEBENZI Isisombululo esigcwele seelebheli ezimhlophe kwiiarhente kunye nabacebisi bokukhangela ukubonelela ngeqonga, ukunika ingxelo, kunye neenkonzo kubathengi babo.
Inyoka Isixhobo sokulandela ukusebenza kwegama eliphambili kwii-SERP. Kuquka ukulandelela umkhondo kunye nokunika ingxelo.
Serpstat -Iqonga le-SEO-in-one kunye noPhicotho lwe-SEO, uPhando loKhuphiswano, Uhlalutyo lwe-Backlink, uPhononongo lokuKhangela kunye nokuKhangela kwinqanaba.
Isincedisi seSERP Isixhobo se-SEO sokwakha amakhonkco, uphicotho lwewebhusayithi kunye nokubeka iliso kwigama elingundoqo.
YenUku - icocekile kwaye kulula ukuyisebenzisa kwaye iyakhawuleza kwaye ichanekile.
SE Usetyenziso -I-injini yokukhangela yendawo yonke enika isisombululo esisindileyo kunye nesizimeleyo.
Semrush yenziwe ziingcali ze-SEO / SEM zeengcali ze-SEO / SEM. Sinolwazi, ubungcali kunye nedatha yokukunceda uthathe iiprojekthi zakho uzise kwinqanaba elilandelayo. Baqokelela isixa esikhulu sedatha ye-SERP ngaphezulu kwamagama aphambili angama-120 ezigidi kunye nemimandla engama-50 ezigidi.
Ikamela leSEO -Ikamela ye-Seo yenza uhlalutyo olupheleleyo lwenjini yokukhangela kwiwebhusayithi yakho, okanye okhuphisana nayo.
Ukubeka iliso kwi-SEO -Khulisa iireyithingi zakho, Landa abo ukhuphisana nabo, kwaye ujonge ukusebenza kwe-SEO ngezona ndawo zibanzi zokulandela umkhondo kwishishini.
SeoSiteCheckup.com -Ukusebenziseka kweNjini yokukhangela yenziwe ngokuLula. Uhlalutyo lomsebenzisi-oluhle kunye nokubeka iliso kwi-SEO yendawo yakho.
Ukuskena kweSERP -Khangela indawo yeinjini yokukhangela yamagama aphambili anomdla kuwe.
IINKCUKACHA -Beka esweni ZONKE Iziphumo eziPhezulu ezingama-20 + zamagama akho aphambili kwaye ufumane izilumkiso xa abakhuphisana nabo bonyusa i-backlinks yabo, imiqondiso yezentlalo, irenki, kunye nokunye.
Uluhlu olufutshane lweeMetriki -Isixhobo esilula sokulinganisa ulwakhiwo lwakho ngokukhawuleza.
Indawo yesiza Uhlobo lwegama elingundoqo, ukulandelela abakhuphisanayo, uhlalutyo lweendaba zoluntu kunye nengxelo ezenzekelayo.
I-SerpStat Isixhobo seNgcebiso yamagama aphambili- amagama aphambili athandwayo kunye neefom zazo ezahlukeneyo ezisetyenziswa ngabantu abafuna iimveliso ezinomdla, iinkonzo okanye ulwazi.
SpyFu ityhila indlela yokuthengisa eyimfihlo yokuthengisa okhuphisana nabo baphumeleleyo. Khangela nasiphi na isizinda kwaye ubone yonke indawo abayibonisileyo kuGoogle: onke amagama aphambili abawathengileyo kwiAdwords, onke amanqanaba e-organic, kunye nalo lonke uhlobo lwentengiso kule minyaka mithandathu idlulileyo.
I-SyCara Iqonga le-SEO libonelela abasebenzisi ngolawulo olukhokelayo lokuhambahamba kwemizi-mveliso, inqanaba lendawo yokukhangela, ukunika ingxelo kwimidiya yoluntu kunye nohlalutyo lwe-SEO.
Treyini encinci -Gcina umkhondo wenqanaba lakho kunye nemizamo ye-SEO kwiphepha elingaphandle.
Umphathi ophezulu -Iimveliso zeNtengiso yeDijithali kunye neSoftware yoVavanyo lweWebhusayithi. Yizame ngokulandela umkhondo ukuya kwinqanaba lamagama angama-200 asimahla.
Unamo -Ukufumana ukugcwala kwabantu abaninzi, phucula umgangatho wakho kwaye ushiye ukhuphiswano ngasemva.
UpCity -Vumela i-UpCity incede ishishini lakho elincinci lifumane ukugcwala simahla kwiinjini zokukhangela, kwimidiya yoluntu kunye nemikhombandlela yasekhaya.
IWebhu Izixhobo ze-SEO zidibanisa ukubanakho kwesoftware ye-SEO ekwi-intanethi kunye nobutyebi bedatha kuphela ezinokubonelelwa ziapps zedesktop.
Yintoni i-SERP yam -Umvavanyi wasimahla weSERP kaWhatsMySerp ukuvumela ukuba ujonge iziphumo zokukhangela zikaGoogle eziphezulu ze-100 zamagama aphambili. Ungayisebenzisa ukuhlalutya ii-SERPs kwaye ujonge indawo yakho yewebhusayithi.
WooRank linqanaba elinamandla kwinqanaba le-100 elimele intengiso yakho ye-intanethi ngexesha elinikiweyo. (Amanqaku aphakathi ngama-50.) I-WooRank isekwe kuphononongo lwewebhusayithi lwezinto ezingama-70 ezisusela kumagama aphambili ukuya ekusebenzeni nasekujongeni uluntu. Kude ngaphezulu kwenani, uphononongo lweWooRank lubonelela ngolwazi olubalulekileyo kunye neengcebiso zokukunceda uthathe umhlaba okwi-intanethi ngesiqhwithi.
I-Wordtracker ibonelela ngezixhobo zoPhando lwamagama aphambili kwi-SEO kunye ne-PPC, ukuKhangelwa kweZinga kunye nezixhobo zoHlahlo lwendawo.
Qaphela: Sineeakhawunti zokudibana namanye ala maqonga.
tags: ImpazamoahrefsAsia seoIilebhu zabasemagunyeniigunyaUhlalutyo lwe-backlinkukufunyanwa kwe-backlinkinkonzo backlinkukuxhuma umvakukunikaEsona sixhobo sokubeka elona gama liphambiliEzona zixhobo ze-intanethi kwi-intanethibing abaphathi bewebhuukukhanyabrightedge seobrightedge vs umqhubijonga igama eliphambilijonga uhlobo lwegama elingundoqojonga amanqanabajonga uluhlu lweinjini yokukhangelajonga indawo ekuyoColibriikholibri seoizixhobo ze-colibri seouphando lokhuphiswanocuutiodiyseoIimpawu zeDragoniIsikhululo somlilo somliloIsikhundla samagama aphambili asimahlaIsitshixo samagama aphambili asimahlaUluhlu lwamagama asimahlaisixhobo samagama esingundoqo samahhalaukulandelwa kwamagama aphambili asimahlaIsikhundla sokujonga simahlatracker yasimahlaIsikhupheli simahla serenkiginzametricsIsixhobo sokulandela umkhondo segama eliphambili kuGoogleIsikhundla sokulandelela kuGoogleUGoogle google rank checkerI-google webmastersgshiftIilebhu zegshiftzintsiukujonga njani inqanaba elingundoqourhwebo inboundUlawulo lwegama elingundoqoIsixhobo solawulo lwamagama aphambiliIndawo ephambili yokulandela umkhondoUkulandela umkhondo wegama elingundoqoelingundoqo umphathi weprojekthiigama elingumlinganiso ophambiliIsixhobo segama lokujonga igamaisoftware yamagama aphambiliI-tracker yenqanaba eliphambiliUkulandela umkhondo wegama eliphambiliIsoftware yokulandelela isoftwareUluhlu lwamagama aphambiliIngxelo yamagama aphambiliiingxelo zenqanaba eliphambiliIsoftware ekumgangatho ophambiliIsixhobo esingundoqo sokubeka indawo simahlaizixhobo zegama elingundoqoI-tracker ekumgangatho ophambiliisixhobo sokubekwa kwamagama aphambiliyophando ngegama elingundoqoIsixhobo sokucebisa ngegama eliphambiliizixhobo zamagama aphambiliukulandelwa kwegama elingundoqoisoftware yokulandela igamaIsixhobo sokulandela umkhondo wegama elingundoqoizixhobo zokulandela umkhondo wamagama aphambiliukwakha ikhonkcoiqhagamshelamkhuluenkulu leyometa forensicsukubeka iliso kwizikhundla zeinjini yokukhangelaUmhloli wenqanaba lemozUmvavanyi womnathaUmkhangeli wenqanaba onlineUkulandela umkhondo kwinqanabaisixhobo esikwi-intanethiontoloiphepha lokuqala seoumkhweli wephephangasemvaUmlandeli wenqanabaUmvavanyi wenqanabaisikhundla sokujonga chromeIsixhobo sokujonga kwinqanabaIsoftware yokujonga inqanabaisixhobo sokujonga inqanabaigama eliphambiliIsoftware ekumgangathoumkhondo wenqanabaIsikhundla somkhondo simahlaindawo tracker seoIsoftware yokulandela umkhondoIsixhobo sokulandela umkhondoukulandelela inqanabaIsoftware yokulandela umkhondoisixhobo sokulandela umkhondoizixhobo zokulandela umkhondoinqanaba lokujongaIsikhundla sokujongaIsoftware yokunika ingxeloisoftware ekumgangathoizixhobo zokubekaindawo trackerisikhundlairenkiwcdlwebukujongangcwabaIzixhobo zeRavenzenzakisiisikhundla sexesha lokwenyaniingxelorio seoSe Intelusezingeniindawo yokukhangela indawo yokukhangelaInjini yokukhangela trackerukukhangela kwinqanaba lenjini yokukhangelaisoftware ekumgangatho ophezulu yokukhangelaisoftware yeenjini yokukhangelaukukhangela kwinqanaba lokukhangelasemrushUhlalutyo lwentoloo AsiaUmhloli wenqaku lencwadi leyoizixhobo zencwadi leyoIsikhangeliinkamelaisixhobo esingundoqo sokubeka inqakutracker igama elingundoqoUkulandela umkhondo wegama eliphambiliIsixhobo solawulo seoizixhobo zokubeka esweni okoamaqonga seoUmhloli wendawo yokumaUmkhangeli wenqanabaukubeka iliso kwinqanabaingxelo yenqanaba leloIsoftware ekuyoisixhobo serenkiizixhobo zerenkiIndawo ekuyo umkhondoUkulandela umkhondo wenqanabaUmkhangeli osemgangathweniesweni ukubeka esweniIsoftware yokufaka ingxeloIsoftware ekuyoisixhobo sokubekaizixhobo ezikumgangatho ophezuluIsikhundla sokulandela umkhondoIsoftware yengxeloIsoftware yokunika ingxeloIsixhobo esikumgangatho wokujonga isixhobozixhoboIzixhobo ze-seo zijonga indawoOko trackerUkulandelaIsoftware yokulandela umkhondoisixhobo sokulandela umkhondoizixhobo zokulandela umkhondoUmvavanyi wenqanaba leencwadi zencwadiseocheckngokwelka.ioseomozseomoz proseomoz izixhobo proseomoz izixhoboUkutshizaUhlalutyo lwenyokaUkuskena i-serpiiserpsserps.comimephuyeserubeuluhlu olufutshanemzobospyfuspyserpindawo encinciumphathiukulandelela ii-imeyileUkulandelela amagama abalulekileyotrack amagama aphambiliisixhobo segama eliphambili le-twitterunamoukukhuselekaIsoftware ekumgangatho wewebhuwebmeupIsoftware ekumgangatho wewebhusayithiwordtrackerAmagama aphambili e-YouTube
Indlela yokwabelana ngokuzenzekelayo ngeZithuba zakho zeWordPress kwiLinkedIn usebenzisa iZapier
Mar 27, 2013 ngo-10: 29 AM
Olu luhlu oluhle. Jonga nje ukubonisa ukuba kusafuneka ndifunde ntoni nge-SEO!
Mar 27, 2013 ngo 2:07 PM
Enkosi! Amanqaku ethu e-SEO kufuneka akunike into oyifunayo.
Mar 28, 2013 ngo-3: 45 AM
Uluhlu olukhulu, enkosi. Kodwa ndicinga ukuba i-webceo ilahlekile, iseti entle yezixhobo ezikwi-intanethi ukuphicotha iwebhusayithi yakho emva koko uyilungiselele.
Mar 28, 2013 ngo-8: 08 AM
Kuhle! Siza kuyongeza!
Mar 28, 2013 ngo-10: 06 AM
Molo Zac, ndikhangele iWebCEO kwaye lelo liqonga ledesktop yeWindows. Sijolise kwizixhobo ezikwi-intanethi apha. Enkosi!
Mar 28, 2013 ngo-5: 30 AM
Ngokuqinisekileyo yindawo yentengiso exineneyo- kwaye olu luhlu luphezulu nje kwi-iceberg! Ukuba unqwenela ukwenza iposti efanayo kodwa ngokuthe ngqo kwizixhobo ze-SEO yengingqi nceda usazise-singavuya ukufaka igalelo kumxholo kunye nokunceda ngokukhawulezisa. Enkosi uDouglas
Epreli 2, 2013 ngo-5: 42 PM
Hayi, thina kwiSERP Scan sikhuphe nje inqaku lokulandela umkhondo wenqanaba. Naliphi na ithuba lokubandakanya thina uDouglas? Enkosi!
Epreli 2, 2013 ngo-10: 56 PM
Ukuhlaziywa, kujongeka ngathi sisixhobo esikhulu.
Ithunyelwe kwibhokisi yemeyile ye-iPhone
Epreli 3, 2013 ngo-4: 56 PM
Enkosi Michael! Ndiyongeze kuluhlu.
Meyi 27, 2013 kwi-4: 21 AM
Enkosi ngokubandakanya iWebMeUUp, iDouglas!
Hi ndlela leyi, songeze nje imodyuli yeMithombo yeendaba kwiWebMeUp. Ke, umntu unokuthi asiyiyo isoftware ye-SEO ngoku. 😉
Juni 24, 2013 ngo-1: 01 AM
Ndisebenzise izixhobo ezimbalwa ukulandela umkhondo wokuma kubathengi bethu kodwa ndifuna ingcebiso ngesixhobo esinokuthi silandele uluhlu lwamagama aphambili angenamkhawulo. Sifuna enye ye-e-yorhwebo ye-portal enamawaka angamagama angundoqo ukulandelela.
Juni 24, 2013 ngo-8: 24 AM
Abathengi bethu abasebenza kubungakanani basebenzisa uMqhubi, @disqus_wFlYDncKKH: Ayibizi mali ininzi kodwa ineqela elithile elifanelekileyo kunye neemodyuli zokunika ingxelo. Unokuthenga kwakhona izikripthi zakho zokulandela umkhondo wenqanaba- kodwa ayisiyonto ityhafileyo njengoko iinjini zokukhangela zizama ukuvimba ezi nkonzo kangangoko kunokwenzeka.
Jul 18, 2013 ngo-10: 22 AM
Uluhlu oluGqwesileyo lwe-SEO yesiXhobo seDouglas! I-WebMeUp yenye yeefeksi zam. Imarike emangalisiweyo Samurai ayenzanga uluhlu olufutshane?
Jul 18, 2013 ngo-11: 03 AM
Indawo yentengiso ye-LXR inoluhlu olude lwezixhobo ezenziwa lula kubanini bamashishini abancinci abafuna ukwenza i-SEO yabo
Jul 23, 2013 ngo-3: 21 PM
Uluhlu olukhulu! Abanye bebengaqhelekanga kwaye kufuneka ndizame. Ukusuka kwezi ndisebenzise iiMetmetmet ezininzi, kodwa iCuutio kufanele ukuba ikuluhlu, nayo, ndiyacinga (www.cuutio.com)
Agasti 23, 2013 ngo-3: 28 PM
Ndicinga ukuba unokuba ujonge isixhobo sethu-positionly.com. Yithathele ispin kwaye ujonge ngokwakho 🙂 Ndiqinisekile ukuba iyakufezekisa imigangatho yakho.
Ngaphandle koko, ndiyazithanda izitaki ezinje. Zonke izixhobo eziluncedo zidityanisiwe. Intle!
Agasti 24, 2013 ngo-6: 49 PM
Enkosi Krystian! Ukongeze kuluhlu.
Jul 3, 2014 ngo-7: 23 AM
Molo apho! uluhlu olukhulu unokuzama ukubeka esweni isikhundla se-seo, ndiyithandile ukuza kuthi ga ngoku..bakhuphe nje ingxelo entsha, ethi (ndicinga) ijongeka intle kakhulu.
Jul 3, 2014 ngo-9: 22 AM
Enkosi! Yongezwe kuluhlu.
Jul 8, 2014 ngo-10: 06 AM
Ngaba ungasithathela ingqalelo isisombululo esophula umhlaba apha https://www.serpwoo.com/?
Sineeakhawunti zasimahla nezihlawulelweyo, kunye nokubonelela ngokulandela umkhondo we-SERP kumagama aphambili asisiseko esiwalandelela onke amalungu.
Enkosi ngokujonga kwaye ndiyathemba ukuba ndiza kukwazi ukukunceda kwisisombululo sakho ukuba uyayidinga.
Jul 8, 2014 ngo-11: 07 AM
Kukhulu, sidibanise isixhobo sakho kuluhlu.
Agasti 15, 2014 ngo-2: 01 PM
Molo, ngelishwa akafumaneki kuluhlu lwe http://rankinity.com. Ndisebenzisa le projekthi kuba inqanaba lokulandela umkhondo ngexesha lokwenyani.
Ndiyathemba ukuba oku kuluncedo kuwe.
Agasti 15, 2014 ngo-4: 01 PM
Enkosi! Ndiyongeze kuluhlu!
Sep 26, 2014 ngo-11: 01 PM
Isithuba esihle kodwa esona sixhobo ndisithandayo yi-ahrefs 🙂
Okt 7, 2014 ngexesha 4:26 AM
Jonga iMeta Forensics nayo: http://metaforensics.io. Isixhobo esikwi-Intanethi esifana nezixhobo zedesktop 'Ukukhwaza Ixoxo' kunye 'neXenu Link Sleuth'. Eyona nto iphambili umahluko kukuba ikwabonelela ngeengxelo ezineenkcukacha kuyilo lwewebhusayithi kwaye inike abasebenzisi ulwazi olunokusetyenzwa malunga neengxaki ezinokubakho kwiwebhusayithi yabo.
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2014 ngo-6: 31 AM
Uluhlu oluLunge kakhulu lwee-SEO Izixhobo… andikaze ndizibone ngaphambili .. Enkosi kakhulu Douglas Karr
Mar 17, 2015 ngo-6: 38 AM
Ngaba unokujonga kwinkonzo yethu https://ranksonic.com kwaye uyongeze kuluhlu lwakho?
Sinokubonelela wonke umntu obhalisela ukuthenga ngeNtengiso yeNtengiso ngesaphulelo esithile
Mar 18, 2015 ngo 12:35 PM
Epreli 11, 2015 ngo-4: 28 PM
Uluhlu olukhulu! Iyamangalisa ngokwenene ngazo zonke ezo zixhobo, kodwa ulibale i-RankScanner-uyisebenzisa ngeveki, kwaye ilungile kulo naliphi na ishishini, mhlawumbi ngaphandle kwamashishini endiqikelelayo. Ndicinga ukuba kufanelekile ukukhankanywa.
Epreli 11, 2015 ngo-4: 40 PM
Enkosi Thomas, siyongezile.
Juni 8, 2015 ngo-10: 34 AM
I-RankSonic inika iziphumo ezinomdla kwithuba elifutshane lalo naliphi na ishishini kwaye unokulandela inani elikhulu lamagama aphambili. Kuvakala kum kuhle kum. Kwaye sisivumelwano kwiwebhusayithi yam. Kananjalo baneLOTI yeempawu ezipholileyo.
Jul 13, 2015 ngo-2: 03 AM
Sawubona uDouglas, singathanda ukuba nesixhobo sethu kolu luhlu ngokunjalo- http://www.siteoscope.com
Jul 15, 2015 ngo-4: 55 PM
Yongezwe! Ijongeka ngathi yiphakheji entle.
Jul 16, 2015 ngo-2: 10 AM
Ngokuqinisekileyo, ukuba unomdla kwideshibhodi ndingakuhamba ngayo 🙂
Okt 5, 2015 ngexesha 11:19 AM
Ulwazi Olukhulu… .Luncedo kakhulu kubaqalayo… .. Enkosi ngokubonelela…
Okt 8, 2015 ngexesha 5:57 AM
Ukugqwesa, mandilule uluhlu lwakho ngesixhobo sophicotho simahla se-seo. http://seocamel.com
Oktobha 8, 2015 ngo-8: 14 PM
Yongeze uLarry! Enkosi.
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2015 ngo-10: 58 PM
Inomdla kakhulu, khange ndiyazi ukuba izixhobo ezininzi zithengiswa emarikeni… Ngoku ndiza kuhamba nganye nganye ndiye kujonga ukuba zinikezela ngantoni na.
Epreli 29, 2016 ngo-8: 42 AM
Uluhlu olukhulu uDouglas! Ngaba ucinga ukuba inani lezixhobo ze-SEO ziya kunciphisa njengoko intengiso igcwele? Kubonakala ngathi wonke umntu wenza izixhobo kule mihla.
Epreli 29, 2016 ngo-3: 38 PM
Iindleko zokungena ekwakheni isixhobo sakho ziphantsi kakhulu, ngenxa yoko andikholelwa njalo. Ngapha koko, sisebenza ngokwethu ngoku. Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba uninzi lwezi zixhobo aluzange luhambisane nobuchwephesha ukuze banike ulwazi olungelulo olunokuthi luvelise ziphumo okanye lonzakalise inkampani ezizisebenzisayo. Ingcebiso yam iya kuba kukuhlala ndikhangela ubuchwephesha kumcebisi nge-SEO ngemvelaphi eqinileyo.
Meyi 5, 2016 kwi-1: 01 PM
Igcinwe kuluhlu lwam lweebhukumaki. Enkosi. Kodwa ndinombuzo, ukuba uthetha ngesixhobo se-webmaster kaGoogle, kutheni ungakhankanyanga ubophelelo lwe-WMT kunye ne-yandex WMT? ya, ndiyazi ukuba kwabanye abantu google = yonke i-Intanethi, kodwa ayinguye wonke umntu. Ndiyazi abantu abaninzi abasebenzisa i-bing njengenjini yokukhangela emiselweyo.
Meyi 5, 2016 kwi-11: 24 PM
Olesya, yindawo efanelekileyo.
Meyi 19, 2016 kwi-1: 40 AM
Uluhlu oluncedo kakhulu lwezixhobo ze-seo. Ndisebenzise phantse ezi.
Jul 26, 2016 ngo-4: 16 AM
Molweni nonke mzalwana nodade, ningathanda ukuchaza malunga nebaclink kwialexa.com?
yile web yam:
xa ndijonga kwi-alexa, kukho kuphela iwebhusayithi ezimbini ezinxibelelana neofisi yam yewebhusayithi. nangona, ndininzi ukwenza iakhawunti kwiiforamu zengxoxo. Lixesha elingakanani elinokunxibelelana neofisi yam yentshona. enkosi ngobubele bakho.
I-Abrar-AP isisombululo seWebhu
Okt 3, 2016 ngexesha 9:25 AM
Zininzi izixhobo ezinkulu. I-SEM Rush yeyona nto ndiyithandayo xa kufikwa kwintengiso kwaye iiMajestic / Ahrefs zezona zilungileyo zokudibanisa. Enye into endiyithandayo kakhulu yiMozcast. Ayisiyiyo itekhnoloji, kodwa kulungile ukuba uqinisekiswe xa ubona intshukumo eninzi kwii-SERPs kwaye ufumanisa ukuba ayinguwe wedwa kwaye kukho uhlaziyo olukhulu oluqhubekayo- ngathi bekukho iiveki ezimbalwa ezidlulileyo
Epreli 29, 2017 ngo-7: 30 PM
I-SEO inkulu kakhulu kwaye ndiqalisiwe ukuba yinto enye. Ngokwenene kuninzi okunokufundwa. Ndiziva ndoyisiwe ngoku, kakhulu ukuba ndigaye. Uqale njani? Ngaba ukhe uzive ufuna ukukhala ulele kuba ungaqinisekanga ukuba uya kuphumelela okanye awuzukuphumelela?
Meyi 1, 2017 kwi-8: 08 PM
Qala ngokuvelisa umxholo omkhulu kubaphulaphuli bakho. Ukukhangela lijelo, hayi iqhinga. Isicwangciso sakho kufuneka sibe kukuqhubeka nokubonelela ngexabiso kubathengi bakho.
UMarcin - 22 Studio
Nov 8, 2017 kwi-9: 18 AM
Ndingacebisa i-unamo, ngaphambili yayibizwa ngokuma. Iluncedo kakhulu kwaye inexabiso eliphantsi xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo.
Jul 22, 2018 ngo-6: 20 AM
Uluhlu olukhulu lweDouglas, i-SERPtimizer sisixhobo esijikeleze i-seo ngesixhobo sokujonga ikhonkco kunye nohlalutyo lomncintiswano. Ngaba ingaba yinto yokongeza?
Jul 22, 2018 ngo-11: 25 AM
Enkosi Erich, wongeze!
Jul 24, 2018 ngo-10: 32 AM
Olu luluhlu oluqaqambileyo- zonke izixhobo ezinkulu zidweliswe kunye!
Ngaba isixhobo iCocolyze.com yinto enokongezwa? Isixhobo sokulandela umkhondo esine-interface elungileyo kunye nedatha ethembekileyo. Ngaba kunganomdla ukubona ukuba wena okanye abanye bacinga ntoni ngayo.
Jul 31, 2019 ngo-11: 01 AM
Ndiqaphele ukuba iMoz ayikho kuludwe…? Kwakhona, ndisebenzisa ingxelo ehlawulelweyo yeBuzzSumo yokujonga i-backlinks.
Jul 31, 2019 ngo-1: 30 PM
Wow, uxolo ndishiye abo ngaphandle. Enkosi uFrank-ndiza kuzihlaziya. Omabini la maqonga aluncedo kakhulu.
Feb 2, 2021 ngo-2: 16 PM
Ndidinga isixhobo se-pls endikhokelayo sesona sixhobo silungileyo
Feb 2, 2021 ngo-2: 26 PM
Molo Mazhar, oko kuxhomekeke ngokwenene kwinto ozama ukuyiphumeza. Ngaba uzama ukwandisa indawo yakho ukuba ibekwe kwinqanaba lendalo? Ngaba uzama ukukhuphisana kuphendlo oluhlawulelweyo? Ngaba uzama ukukhawulezisa indawo yakho? Ngaba uzama ukwenza uphando okhuphisana nalo? Zithini iinjongo zakho?
Feb 8, 2021 ngo-2: 47 PM
Ndifuna ukubeka indawo yam kwindawo
Feb 9, 2021 ngo-9: 49 AM
Ingcebiso yam iya kuba kukuqala Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle (simahla) apho ungabhalisa khona indawo kwaye ujonge nayiphi na imiba, sebenzisa Ukuqonda okunamaphepha ukuphucula ukusebenza kwendawo yakho (simahla) emva koko unokunqwenela ukwenza ifayile ye- Uphicotho lwe-SEO, emva koko kuya kufuneka wenze uhlalutyo lomncintiswano ngqo kwaye usebenze ekwenzeni umxholo wephepha lakho ubengcono kunabo ukhuphisana nabo. Ukulungiselela oko, ndisebenzisa SEMrush.
Feb 18, 2021 ngo-1: 30 AM
Kudala ndisebenzisa ii-ahrefs kunye neMoz simahla kwizixhobo ze-SEO kwaye ndicinga ukuba ezo zinto kufuneka zinezixhobo ze-SEO wonke umntu kufuneka azame. Enkosi ngenqaku elimangalisayo. Ndingathanda ukuyifumana njengoko ndizimisele ukwazisa ihabhu entsha yolwazi kwiwebhusayithi yethu ( Doodle yedijithali ). Enkosi!
Feb 19, 2021 ngo-1: 20 AM
Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, bendikhangela isixhobo esifanelekileyo se-SEO sokulandela indlela endisebenza ngayo. Uninzi lwezixhobo ozikhankanyileyo bezintsha ngokupheleleyo kum. Enkosi ngokwabelana ngesixhobo esingummangaliso sokulandela umkhondo. Kutshanje ndisebenzise isixhobo sokujonga i-SERP, iSerpple. Unokuphinda ujonge isixhobo sokulandela idatha yamagama aphambili. Ukongeza, ungabhala inqaku elichaza izibonelelo zokusebenzisa isixhobo se-SERP Checker ye-SEO kwiintsuku ezizayo. Oku kunokunceda abathengisi bedijithali njengam.
Feb 19, 2021 ngo-8: 43 AM
Enkosi Rachael, ndongeze i-Serpple kuluhlu!
Feb 22, 2021 ngo-7: 42 AM
Enkosi ngokuthathela ingqalelo.
Mar 16, 2021 ngo 2:18 PM
Phantse wonke umntu kuluhlu lwakho. Kodwa ndiyasithanda isixhobo sikaGoogle uGWM. Enye yezona zilungileyo. Eyona ilungileyo kum
Mar 16, 2021 ngo 7:15 PM
Kuyinto encinci, kodwa ndicinga ukuba iyaphucula!